दुई राप्रपाको एकता घोषणा « Tulsipur Khabar
दुई राप्रपाको एकता घोषणा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच बुधवार एकता घोषणा भएको छ । काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी दुई पार्टीले विधिवत रुपमा एक भएको घोषणा गरेका हुन् । एकीकरण सम्बन्धी आधारपत्रमा राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षद्धय पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
घोषणा कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफूले कहिल्यै पनि पार्टी नफुटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकता घोषणा कार्यक्रममा थापाले हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ गीता हातमा लिएर पार्टी नफुटाउने प्रतिज्ञा गरे ।
पार्टीका अन्य दुई अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि पार्टी नफुटाउने प्रतिज्ञा गरिसकेको भन्दै थापाले आफू पनि पार्टी नफुटाउने बताए । अध्यक्ष थापाले यसअघि पार्टी फुटेको तीता मिठा घटनालाई बिर्सने पनि बताए । थापाले कार्यकर्तालाई पनि व्यक्तिको पछाडि लाग्न छाडेर विचारको पछाडि लाग्न आग्रह गरे ।